युक्रेनि सेना सितको भिडन्तमा रुसी जर्नेल मारिए, के छ पछिल्लो अवस्था ? — Imandarmedia.com
युक्रेनि सेना सितको भिडन्तमा रुसी जर्नेल मारिए, के छ पछिल्लो अवस्था ?
परमाणुनीतिसम्बन्धी विज्ञ प्राध्यापक जेम्स अक्सनले बिहीवार लेखेका छन्, “चर्नोबल बसोबास नरहेको एउटा ठूलो क्षेत्रमा छ। युक्रेनका अरू रीयाक्टरहरू त्यस्ता रिक्त स्थानमा छैनन्। परमाणु ऊर्जाकेन्द्रहरू युद्ध क्षेत्रका लागि बनाइएका होइनन्।”